Waa maxay Horumarka Lacageed ee Kaadhka Amaahda? - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Waa maxay Horumarka Lacageed ee Kaadhka Amaahda?
Kahor intaadan isticmaalin kaarka deynta si aad u heshid lacag hormaris ah, waa inaad ogaataa khidmadaha iyo khataraha, iyo sidoo kale faa'iidooyinka.
Horumarka kaadhka kreditka waa hormar lacag caddaan ah oo lagu sameeyay kaarka deynta. Si kale aan u dhigo, waxa aad lacag ka amaahanaysaa kaarka deynta si aad lacag ugu shubto jeebkaaga. Qaadashada kaadhka amaahda ee lacagta caddaanka ah waxay leedahay kharash, xaaladaha qaarkood, waxay xaddidaysaa qaddarka aad kala bixi karto.
Asal ahaan, waxaad kala bixi kartaa lacag bangigaaga ama ATM-ka adiga oo isticmaalaya kaarka deynta. Iyadoo laga yaabo inay u muuqato inaad lacag kula baxayso kaarka deynta, waxaad dhab ahaantii hore u sii qaadanaysaa kaarka deynta.
Si ka duwan ka bixista kaadhka debit-ka, kaas oo kuu ogolaanaya inaad gasho lacagtaada, horudhac lacageed ayaa ku lug leh bixiyaha kaadhka deynta oo lacag ku amaahinaya oo ku dalacaya akoonkaaga. Horumarinta lacagta caddaanka ahi waxay badanaa la timaadaa khidmad wax kala beddelasho iyo boqolkiiba boqol ka sarreeya marka loo eego noocyada kale ee deymaha (APR).
Intaa waxaa dheer, waxaa hubaal ah inay xaddidayaan inta aad horay u sii socon karto. Waxay u yaqaanaan tan sida khad deyn caddaan ah, waxayna u badan tahay inay si fudud qayb ka tahay xadka deynta guud.
Si kastaba ha ahaatee, qaadashada hormaris lacageed oo kaadhka deynta ah maaha doorashada kaliya. Qaar ka mid ah shirkadaha kaararka deynta ayaa siinaya isticmaalayaasha jeegaga habboon ee boostada kuwaas oo ku xiran akoonadooda.
Haddii aad dhigato iyaga, waxay u qaadanayaan wax kala iibsiga inuu yahay horu marin lacageed, waxayna kugu dallici doonaan APR-da hormariska ah iyo khidmadaha wax kala iibsiga.
Si loo fahmo mawduuca, waxaan ka wada hadalnay kuwan soo socda.
Baadhid: 15 Barnaamijyada Hormarinta Lacagta Ugu Fiican ee Ku Caawinaya Ilaa Lacag -bixinta | 2022
Waa maxay Hormarinta Lacagta?
Inta badan kaarka deynta iyo kaadhadhka lacag-bixinta ayaa bixiya ikhtiyaar hore oo lacag caddaan ah.
Kaarka haystayaashu waxay la bixi karaan lacag caddaan ah ilaa xad gaar ah, ha ahaato ATM-ka ama miiska laga soo iibsado bangi ama hay'ad maaliyadeed oo kale; Kaarka deynta, tani waa inay noqotaa xadka deynta (ama boqolkiiba qayb ka mid ah).
Kharash dhan 3 ilaa 5% ee lacagta la amaahday waa wax caadi u ah horumarinta lacagta caddaanka ah. Sicirka dulsaarka wax kala beddelashada kaarka deynta ayaa si joogto ah uga badan macaamilka kaararka deynta kale. Waxay amaahdaan bilawga maalinta lacag caddaan ah; waxay kordhiyaan dulsaarka maalin kasta.
Marka loo eego shuruudaha shabakada kaarka deynta, qaar ka mid ah "iibsiga" lagu sameeyo kaarka deynta ayaa ah badeecooyin lacag caddaan ah. Waxa kale oo ay u arkaan in ay tahay horu-marin lacageed, taasoo keentay in dulsaarka sare uu kaco oo lumiyo muddada nimcada.
Dalabka lacagaha, kaadhadhka debit-ka ee prepaid-ka ah, tigidhada bakhtiyaanasiibka, chips-yada ciyaaraha, lacagaha mobilada, iyo cashuuraha iyo khidmadaha qaarkood ee la siiyo dawlado kala duwan ayaa dhamaantood tusaale u ah.
Haddii ganacsatadu aysan shaacin karin nooca dhabta ah ee wax kala iibsiga, waxay u baaraandegi doonaan sida macaamilka kaararka deynta caadiga ah.
Qaar badan oo tafaariiqle ah ayaa u gudbiyay khidmadaha habaynta kaadhka deynta kuwa haysta kaadhka deynta, inkasta oo xeerarka shabakadaha kaararka deynta ay muujinayaan inaysan ka qaadin macaamiisha kaararka deynta kharash dheeraad ah isticmaalka kaadhadhkooda.
Marka loo eego qawaaniinta nidaamka kaadhka, bangi kasta oo soo saara nooca kaarka deynta waa inuu ku soo saaraa lacag horudhac ah miiska miiska si uu u haysto kaarka deynta kaasoo soo bandhigay qaab la aqbali karo oo aqoonsi ah, xitaa haddii kaarku aanu bixin karin PIN-kooda.
Hubi Sidoo Kale: Barnaamijyada Horumarinta Lacagta sida Dave: Dib -u -eegid Buuxda ee 2021
Goorma ayaad ku fekereysaa inaad isticmaashid hormariska lacagta caddaanka ah?
Xaalad degdeg ah, horumarinta lacagta caddaanka ahi waxay noqon kartaa ilo dhaqaale oo qiimo leh. Inkastoo aysan ahayn inay si joogto ah u isticmaalaan horumarinta lacagta caddaanka ah, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto haddii aad dhaqaale yar tahay oo aanad awoodin inaad shay ku dalacdo.
Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in, marka la eego kharashyada, waa inaad si joogto ah u baadho dhammaan fursadahaaga.
Arag sidoo kale: Sida Loo Helo Tigidhada Baarista Hore ee Filimada Degdegga ah | 6 Hagaha Sharciga ah
Waa fikrad wanaagsan inaad dib u eegto heshiiska kaadhka deynta si aad u hubiso inaad fahamtay shuruudaha iyo shuruudaha. Raadi oo qiimee:
1. Lacagta wax kala iibsiga
Bixi khidmadda wax kala iibsiga ee horumarinta kaadhka deynta.
APR-ka ee horumarinta lacagta caddaanka ah ayaa marar badan ka sarreeya iibsashada kaararka deynta.
3. Muddada aan dulsaarka lahayn
Horumarka lacagta caddaanka ah waqtiyada badankooda waxay ku bilowdaan korsaar kor u kaca wakhtiga ka bixitaanka, taas oo macnaheedu yahay in aanay jirin wakhti nimco ah.
Waa maxay dariiqooyinka lagu xadidayo khidmadaha la xidhiidha Hormarin lacageed?
1. Fahmo Kharashaadkaga Wax kala iibsiga
Qaar ka mid ah khidmadaha wax kala iibsiga waa boqolkiiba wadarta hormariska. Halkan, waxaad ku ilaalin kartaa kharashka ugu yar adiga oo la laabanayo kaliya waxaad u baahan tahay.
Khidmadaha kale ee wax kala iibsiga waxa ay noqon karaan sicir fidsan ama isku dhafan kharash guri iyo boqolkiiba qiimaha wax kala iibsiga.
Xaaladdan oo kale, halkii aad samayn lahayd wax kala beddelasho yar yar, kaliya waxaad bixinaysaa kharashka guriga hal mar haddii aad qaadato dhammaan lacagta caddaanka ah ee aad ku qiyaastay inaad u baahan tahay hal mar.
2. Qorshee lacag bixintaada
Wax kala beddelashada lacagta caddaanka ah, sida hor-u-marku, waxay badanaa bilaabaan kor u kaca dulsaarka isla markiiba, si ka duwan iibsiyada kaararka deynta caadiga ah, kuwaas oo leh waqti nimco oo u dhexeeya iibka iyo taariikhda bixinta lacag bixinta marka dulsaarku kordho.
Taasi waxay tusinaysaa in dib u bixinta hormariska kaashka waqtigii loogu talagalay ay muhiim u tahay badbaadinta lacagta mustaqbalka fog.
Sideed Iska Ilaali Kartaa Inaad Qaadato Hormarin Lacageed?
1. Wax ku iibso kaarka deynta
Haddii aad fursad u haysato, ku dallacaadda wax iibsiga ee kaarkaada halkii aad ka heli lahayd lacag hormaris ah waxay inta badan kaa badbaadin kartaa lacagta dulsaarka iyo khidmadaha wax kala iibsiga.
Ka fogow inaad wax iibsato: Ka fiirso haddii iibka aad qorshaynayso inaad ku samayso horuumarinta kaashka uu u qalmo kharashyada dheeraadka ah ama haddii ay sugi karto.
2. Ka fogow wax iibsiga aan loo baahnayn
Naftaada weydii haddii go'aanka iibsashada aad doonayso inaad ku samayso horu-marinkaaga lacagta caddaanka ah uu u qalmo kharashka dheeraadka ah ama haddii ay sii jiri karto.
3. La soco dheelitirnaantaada
Haddii aad ka baqayso in lacagtu kaa dhammaanayso, la soco hadhaaga akoonkaaga si aadan ula yaabin.
Caadi ahaan waxaad dejisan kartaa SMS ama iimaylka digniinaha haddii hadhaagaagu uu ka hooseeyo xaddi go'an haddii aad bangiga internetka ku bixiso. Waxaad iska qori kartaa digniinaha casriga ah haddii aad tahay macmiil Bank of America.
4. Dhis Sanduuqa Gurmadka Degdegga ah
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad bixiso alaabta aan lagu darin miisaaniyadaada bisha, sida dayactirka baabuurta.
Marka arrimuhu si fiican u socdaan, lacag meel u dhig sanduuqa xaaladaha degdegga ah si aadan u isticmaalin kaarka deynta horumarinta lacagta caddaanka ah.
Shuruudaha iyo Kharashyada Hormarinta Lacagta
Horumarinta lacagta caddaanka ah waa hab ku habboon in lacag lagu helo si degdeg ah, laakiin kharashyadu caadi ahaan way ka miisaan badan yihiin faa'iidooyinka.
Dib u eeg shuruudaha horusocodka lacagta caddaanka ah ka hor inta aadan mid ka bixin, si laguugu sheego khidmadaha xad dhaafka ah ee aad la kulmi doonto.
1. Casharka Hormarinta APR
Horumarinta lacagta caddaanka ahi waxay leedahay dulsaar ka duwan iibsashada ama wareejinta dheelitirka, taas oo inta badan ka weyn.
Citi® Double Cash Card, tusaale ahaan, waxa uu bixiyaa 0% APR bilowga ah ee wareejinta hadhaaga 18 bilood.
Taas ka dib, doorsoome APR wuxuu u dhexeeyaa 13.99 boqolkiiba ilaa 23.99 boqolkiiba, oo leh doorsoome APR 25.24 boqolkiiba horumarinta lacagta caddaanka ah.
2. Kharashka Hormarinta Lacagta:
Bixiyaha kaarkaagu wuxuu inta badan dalacayaa khidmad lacag caddaan ah, oo caadiyan ah 3% ama 5% wadarta qaddarka hormaris kasta oo caddaan ah oo aad codsato.
$250 hormaris ah oo caddaan ah oo leh 5% khidmad, tusaale ahaan, waxay kugu kacaysaa $12.50.
3. Kharashka ATM-ka ama Bangiga:
Waa inaad filaysaa inaad bixiso lacag hormaris ah oo caddaan ah haddii aad isticmaasho ATM-ka ama aad tagto bangi.
Ma jiro wakhti nimco: Muddada nimcada ma khusayso horumarinta lacagta caddaanka ah. Taas macnaheedu waa inay kugu dallici doonaan dulsaar lacagtaada hormariska laga bilaabo marka aad soo saarto.
Taasi maahan kiis marka aad isticmaasho kaarkaaga si aad wax u kala beddesho oo soo-saaruhu uu bixiyo wakhti nimco.
Muddada ugu yaraan 21 maalmood oo aanay wax dulsaar ah ku dallici doonin haddii aad si buuxda u bixiso lacagtaada ka hor taariikhda kama dambaysta ah.
4. Xadka deynta oo kala duwan
Horumarka lacagta caddaanka ah waxay inta badan leeyihiin xad u gaar ah, taas oo inta badan ah boqolkiiba xadka guud ee deyntaada. Waxa suurtogal ah in aad ka bixi karto oo kaliya dhawr boqol oo doolar.
Waa maxay Beddelka Hormarinta Lacagta caddaanka ah?
Iyadoo qaadashada lacag caddaan ah laga yaabo inay u muuqato fikrad caqli-gal ah, waxay si dhakhso ah u horseedi kartaa deyn. Waxay kugula talinayaan inaad iska ilaaliso inaad hormariso lacag caddaan ah oo beddelkeeda aad eegto doorashooyin kale oo leh shuruudo ka wanaagsan.
1. Amaahso qoyska ama asxaabta
Waxaad lacag ka amaahan kartaa qoyska ama saaxiibada. Iyadoo weydiintu ay noqon karto wax laga xumaado, inta badan waa habka ugu kharash-oolsan si aad u hesho lacagaha aad u baahan tahay. Si aad xidhiidhkaaga u ilaaliso, hubi inaad samaysato qorshe lacag celin ah.
2. Qaado deyn shaqsiyeed
Amaahda shakhsi ahaaneed waxay caadi ahaan ka leeyihiin shuruudo ka wanaagsan horumarinta lacagta caddaanka ah, iyo haddii aad leedahay credit wanaagsan, waxaad heli kartaa lacag badan. Caadi ahaan waxaad ku soo celin kartaa deynta shakhsi ahaaneed ee dulsaar go'an oo aad uga jaban APR-ka ay ku soo rogeen shirkadaha kaararka deynta.
Horumarinta lacagta Capital One ayaa laga heli karaa ATM-yada iyo xarumaha bangiyada ee sita calaamadda Visa ama Mastercard, waxayna kala baxaan si la mid ah kaarka deynta. Horumarinta kaadhka amaahda ee kaadhka amaahda waa deymo wakhti gaaban ah oo laga helo kaadhka bixiyahaaga oo la socda kharashyo iyo dulsaar.
Amaahda Kaadhka Debit
Amaahda kaarka debitku waa nooc amaah ah oo u baahan inaad dalbato, hesho, oo aad ku bixiso deyntaada kaarka lacag-bixinnada firfircoon.
Halkee ayaan ka heli karaa Hormarin Lacageed?
Si aad u heshid lacag hormaris ah oo kaadhka debit ka ah, si fudud u booqo bangiga maxaliga ah ama laanta midowga deymaha oo la hadal teliye. Waxay ku dalaci doonaan lacag hormaris ah, inta badan boqolkiiba dhexdhexaad ah wadarta lacagta la baxay.
Sideen ku go'aamin karaa haddii hormarka lacagta caddaanka ahi ku habboon tahay ganacsigayga?
Ganacsiyada nooc kasta ah iyo cabbir kasta waxay xisaabin karaan soo celinta maalgashiga iyadoo lagu saleynayo dhammaan kharashka maalgashiga. Xisaabi dib u soo celintaada maalgashiga si aad u aragto haddii hormarka lacagta caddaanka ahi u fiican tahay shirkaddaada (ROI). Qaaciddada fudud ayaa go'aamin karta ROI-gaaban: ku noqoshada maalgashiga (boqolkiiba) = faa'iidada saafiga ah / wadarta kharashka maalgashiga x 100.
Ganacsigaygu ma sii haysan karaa processor-ka kaarka deynta ee hadda?
Waxaa laga yaabaa, si kastaba ha ahaatee, u beddelashada mid ka mid ah shuraakayaashayada habaynta ayaa laga yaabaa inay faa'iido badan u leedahay ururkaaga.
Maxaa dhacaya haddii iibkaygu hoos u dhaco ama uu dedejiyo ka dib marka maalgelintu dhacdo?
Waxay naqshadeeyeen horu marin lacageed oo baayacmushtar ah si ay ula shaqeeyaan iibka isbedbeddelaya.
Hormarin baayacmushtar ma yahay deyn?
Shirkadda fursadda hormarisa ayaa iibsata qayb ka mid ah iibka kaadhka mustaqbalka.
Wali ma heli karaa hormaris lacageed haddii aan leeyahay credit credit?
Haa Dhab ahaantii! Kuwa leh "credit xun" weli waxay heli karaan hormar lacageed.
Dadka raadsada lacag caddaan ah waxay caadi ahaan weydiisanayaan deyn lid ku ah mushaharkooda xiga.
Waxay mararka qaarkood u baahan yihiin horumarin lacag caddaan ah si ay waxtar u yeeshaan ama sababtoo ah waa lacagta kaliya ee la aqbalo adeegga la bixiyo.
Natiijo ahaan, ma sheegi kartid muhiimadeeda.
Source source: https://i1.wp.com/ecofiney.com/wp-content/uploads/2020/04/cash-advance-1.jpg?fit=1280%2C853&ssl=1
Waa maxay APR Wanaagsan ee Kaarka Daynta?
Haddii aad sida caadiga ah aad si buuxda u bixiso akoonkaaga kaarka deynta bil kasta, hayso sanduuq degdeg ah oo weyn, oo…
Sida lacag loogu daro PayPal ka Debit Card
Kuwa raba inay xoogaa lacag ah ku haystaan ​​akoonkooda PayPal si ay ugu habboonaato ama…
Hadyada ay doorteen waa hadyada ugu wanaagsan ee aad ku fikiri karto inaad siiso kuwa aad...
10ka Meelood ee ugu Wanaagsan ee Lagu Iibsado Kaararka Hadiyada 2021
Kaararka hadyada waxa kaliya oo lagu iibin jiray qiimaha wajiga, oo aad dhif u tahay (haddii waligaa) aad aragto…
CVS ha iibiso Kaadhadhka Hadiyada Liiska Kaararka Hadiyada ee lagu iibiyo CVS
Hibada ayaa noqonaysa mid caan ah. Sannad kasta, 93 boqolkiiba dadka Maraykanku waxay iibsadaan ama helaan kaadhka hadiyadda, marka loo eego…